အနာဂတ်မီဒီယာအယူအဆများ - ၂၀၁၈ NAB Show၊ Pre-Show Interview #NABShow @NABShow @FMCTraining | NAB သတင်းများ | 2018 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts - 2018 NAB ပြရန်, Pre-Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @FMCTraining
၏ဘင် Kozuch အနာဂတ်မီဒီယာ Concepts မှာ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလားညီလာခံ၏သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးပွဲ NAB ပြရန်.
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit 2018-02-28
ယခင်: Caringo - 2018 NAB ပြရန်, Pre-Show ကိုမေးမြန်းချက်။ #NABShow @NABShow @CaringoStorage
နောက်တစ်ခု: Kid ငါ့ကို ... သင်ကအခမဲ့ကဲ့သို့ပင်မ!